Writer Magic, Author at - Page 83 of 83
သင်္ကြန်အကြိုနေ့ပါတီ ကျင်းပသူများကို အမှုဖွင့်ကာ ဖမ်းဆီးအရေးယူပါပြီ
By Writer MagicPosted on April 13, 2020 April 13, 2020
တာချီလိတ်မြို့တွင် ဒေသန္တရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို ချိုးဖောက်ကာ Mr. CRUSH Bar တွင် သင်္ကြန်အကြိုနေ့ပါတီ ကျင်းပနေမှု(ရုပ်သံ)ပါဝင်သူများကို ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်သော ဉပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ ဖမ်းဆီးအရေးယူ မြန်မာ – ထိုင်းနယ်စပ်ဒေသ၊ တာချီလိတ်မြို့တွင် KTV၊ Bar […]
စင်ကာပူမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတဲ့ မြန်မာတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေ့အကြုံ…
အမှားပါရင်ခွင့်လွတ်ပါ။………။ မြန်မာပြည်ကလူငယ်တွေအတွက်ရေးတာပါ….. ကျွန်တော်နေမကောင်းပါဘူး..အခုလည်းcovid 19positive နဲ့ဆေးရုံတက်နေရတာပါ..ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတွေသိပါတယ်… မြန်မာလူငယ်တွေ..ညီလေးညီမလေးတွေ အကိုကြီးတွေ တစ်ချိန်တုန်းကဘယ်လိုနေခဲ့နေခဲ့ အခုချိန်တော့အိမ်မှာနေကြပါ… မြန်မာလူငယ်တွေကစာဖတ်ရမှာပျင်းတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိတယ်…..ကျွန်တော်လည်းလူငယ်ပဲလေ ကိုယ်ချင်းစာတက်တာပေါ့. ဒါပေမယ့်အခုချိန်မှာတော့သတင်းပုံမှန်ဖတ်ပါ.. တစ်ကမ္ဘာလုံး ဖြစ်နေတဲ့ကပ်ရောဂါကို ပေါ့ပေါ့လေးမထင်ကြပါနဲ့…. ညီအကိုတွေကို အရမ်းချစ်လို့သတိပေးမယ် သေတက်တယ်နော်…သတိထားရမယ့်အချိန်ပါ အပျော်တွေနည်းနည်းလျော့သင့်ပါတယ်… […]
အဆိုတော် မျိုးကြီး နှင့် လူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့ အမိန့်ထုတ်ပြီးမှ ကျင်းပတဲ့ အင်းစိန်က တရားပွဲ…
အဆိုတော် မျိုးကြီး နှင့် လူစုလူဝေးမလုပ်ဖို့ အမိန့်ထုတ်ပြီးမှ ကျင်းပတဲ့ အင်းစိန်က တရားပွဲ… အီတလီခံလိုက်ရတာလဲ ဘာသာရေးအခန်းနားတစ်ခုမှာ ၊ အခုမြန်မာပြည် တစ်ရက်ထဲ ဆယ်ယောက် Positive တွေ့တာ အများဆုံးက ဘာသာရေးပွဲတစ်ခုက ၊ ဒီလိုတာ […]
နောက်နှစ်ပတ်အတွင်း ပိုမိုခက်ခဲသောကာလကို ဖြတ်သန်းရနိုင်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတိပေး
ရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိမှုတွေ ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ ပြည်ပကပြန်လာတဲ့သူတွေထဲက နောက်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှု ထပ်မံဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ နောက်နှစ်ပတ်အတွင်းပိုမိုခက်ခဲတဲ့ကာလကို ဖြတ်သန်းရနိုင်တယ်လို့ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ ယနေ့ ဧပြီလ(၁၃)ရက်နေ့က နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရဲ့ Fb Live ကနေပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အားလုံး သတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်း အတိုင်ပင်ခံက တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ […]
ဗိုင်းရပ်စ်ကိစ္စအားလုံးရှင်းမှပဲ ဂျူတီလဲပေးပါ ကူးချင်းကူး ကျနော်ပဲအကူးခံလိုက်ပါ့မယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ ရဲရဲတောက်ဆရာဝန်တစ်ဦး
ဘီးလင်းမြို့က လေးစားစရာ ဆရာတစ်ဦး(သို့)တိုက်စစ်မှူး တာဝန်ကျတဲ့ရက်ပြည့်တော့ ဂျူတီချိန်းမယ့်ဆရာဝန်ကလာတယ် အဲ့လိုလာတာကို ဆရာနေမျိုးလင်း က နေပါစေဆရာ ဒီဗိုင်းရပ်ကိစ္စ အားလုံးရှင်းမှ ဆရာဂျူတီဝင်ပေးပါ ကျွန်တော်ပဲ အခုဆက်ဝင်မယ်နော် ဘာလို့လဲဆိုတော့ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ သံသယလူနာထဲက ဖြစ်စေ တခြားကဖြစ်စေ ကူးခဲ့မယ်ဆိုရင် […]
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တွေ့ရှိသူ ၂ ဦးထပ်မံတွေ့ရှိရကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကြေငြာ
By Writer MagicPosted on April 12, 2020
COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၁၃-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက်(၀၀:၃၀) နာရီ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ၁။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ (၁၂-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများအရ စောင့်ကြည့်လူနာများ၊ ဆေးရုံများနှင့် သက်ဆိုင်ရာနေရာများတွင် […]
မန္တလေးအမရပူရ မီးလောင်ကျွမ်းမှု Level3အဆင့်ဖြင့် ငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရ
By Writer MagicPosted on April 12, 2020 April 12, 2020
၁၂-၄-၂၀၂၀ ယခု မန်းလေး အမရပူရမြို့နယ်၊ စည်ပင်ရွာ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားနေပါတယါ Level-(3)ထိ တက်နေပါပြီ ၁၂-၄-၂၀၂၀ အခုည အမရပူရမြို့နယ်၊စည်ပင်ရွာ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား Level-(1)(2) (3) လက်ရှိ မီငြိမ်းပါပြီ လူနေအိမ်များပါ။ Ctedit Than Htay
ဒီနေ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိသူ တစ်ဦး နှင့် ပတ်သက်၍ ည (၈:၀၀) နာရီ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
OVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၁၂-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ၁။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ ယနေ့ COVID-19 ရောဂါအတွက်ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှု ပထမအသုတ်အား စစ်ဆေးမှုတွင် စောင့်ကြည့်လူနာများ၊ ဆေးရုံများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ […]
Covid 19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့ ဆရာဝန်မကြီး Covid-19 Positive အဖြေမထွက်ခင် ရေးတဲ့စာ
By Writer MagicPosted on April 11, 2020 April 12, 2020
Positive ဖြစ်ရင်ဘာလုပ်မလဲ။ မကြောက်ဘူးဟုမုသားမသုံးလိုသော်လည်း ကိုယ့်ရှေ့ကိုယ်ဘေးကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် အနီးအဝေးက အရွယ်သုဲးပါးလူများ ချစ်သောသူများနှင့် ရုတ်တရက် နှုတ်မဆက်ခွဲသွားကြ ချိန်တွင် မိမိအတွက်လည်းဆုဲးဖြတ်ပြင်ဆင်ထားရန် သင့်တော်သည်ဟုယူဆ၍ ပစ္စပ္ပန်နှင့် နီးကပ်နေသောအနာဂတ်အတွက် အချိန်ဇယားပြုလုပ်ထားမိပါသည်။ Swab အဖြေက positive ဆိုလျှင် 1.isolation […]